सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी, आज कतिमा भयो कारेबार ? – Clickmandu
सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी, आज कतिमा भयो कारेबार ?
क्लिकमान्डु २०७६ भदौ २६ गते १४:४५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । दुई महीनादेखि लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्य पछिल्लो साता भने ओरालो लागेको छ । गत साताको शुक्रबारसम्म वृद्धि भइरहेको सुनको मूल्य आइतबारदेखि ओरालो लागिरहेको छ । शनिबार प्रतितोला ७२ हजारमा कारोवार भएको छापावाला सुन आइतबार प्रतितोला ५०० ले घटेर ७१ हजार ५०० पुगेको थियो । त्यस्तै मङ्गलबार सुनको मूल्य घटेर ७१ हजार पुगेको थियो । बुधबार भने सुनको मूल्य स्थिर रह्यो ।
आज पुनःसुनको मूल्यमा प्रतितोला २०० रुपैंयाले गिरावट आएको छ । बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ८०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला २०० रुपैंयाले घटेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य रु ५० हजार ५०० निर्धारण गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । सुनको मूल्य घटेसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ । बुधबार प्रतितोला रु ८८० मा कारोवार भएको चाँदीको मूल्य रु पाँचले घटेर रु ८७५ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ ।